Manomeza voninahitra 7i amin'ny fakantsary miodina aseho amin'ny fomba ofisialy | Androidsis
Honor 7i amin'ny fakantsary miodina aseho amin'ny fomba ofisialy
Huawei dia iray amin'ireo mpanamboatra finday marani-tsaina indrindra any Sina ary mahomby indrindra amin'ny firenena Aziatika. Izany dia vokatry ny fanamboaran'izy ireo terminal tsara nandritra ny taona maro, nametrahana azy ireo teny an-tsena tamin'ny vidiny fifaninanana mahaliana indrindra amin'ny fifaninanana.
Izany no nahatonga azy ireo nahavita nampitombo ny tombom-barotra azony ary mandefa fitaovana avo lenta miaraka amin'ny antsipiriany hafahafa izay nahasarika ny sainay. Araka ny fantatrao tsara, Huawei dia nanao marika kely mitondra ny anarana hoe Honor, koa ankehitriny, fitaovana vaovao no natolotra izay manatevin-daharana ny fianakavian'ny terminal Honor.
Miresaka isika Hajao 7i. Navoaka tamina herinandro vitsivitsy lasa izay ity fitaovana ity ary notafihan'ny iray tamin'ireo singa ao aminy izahay, dia ilay fakantsary. dia fakan-tsary fakantsary, araka ny hita amin'ny sary, azo ampiasaina ho fakan-tsary aoriana na fakantsary anoloana. Raha miresaka ny mampiavaka azy isika dia hitantsika ny fakan'ny fakantsary 180 degre, fakantsary an'ny 13 Megapixels miaraka amina aperture 2.0, fisidihana mandeha ho azy, fifandanjana fotsy mandeha ho azy, fanekena ny tarehy, ankoatry ny fampiasa hafa. Tsy misy isalasalana fa ity no ampahany mahaliana indrindra amin'ny terminal, fakantsary mihetsika 13-megapixel azo ampiasaina ho fakan-tsary aloha sy ho fakantsary aoriana.
Saingy na eo aza izany, misy singa iray hafa nahasarika ny saintsika ary izany no izy scanner an'ny rantsantanana. Ity sensor ity dia tsy eo an-damosina na eo alohan'ilay finday avo lenta toy ny amin'ny ankamaroan'ny terminal, fa kosa Any amin'ny iray amin'ireo sisin'ny terminal no misy azy. Ity sensor ity dia ho bokotra hanidy sy hamaha ny terminal, toerana stratejika satria mpampiasa maro no zatra manidy ny fitaovany eo anilany.
Rehefa nahita ireo singa roa mahaliana indrindra amin'ity terminal ity, dia ho hitantsika ny masontsivana. Hitanay fa hanana ny Honor 7i a Efijery 5,2 inch miaraka amin'ny tontonana LCD eo ambanin'ny vahaolana 1080p. Ao anaty no ahitantsika SoC mandrafitra azy, processeur misy maritrano 64-bit, fotony valo ary novokarin'i Qualcomm, ny Snapdragon 616, fahatsiarovana RAM an'ny 3 GB ary tahiry anatiny 32 GB. Ny bateria dia 3.100 Mah, Dual-SIM izy ary mifanaraka amin'ny 4G / LTE.
Ny Honor 7i dia sarany eo amin'ny $ 250 ka hatramin'ny $ 300 ary ny fanombohana azy dia ho tonga voalohany any Chine. Mbola tsy fantatsika raha mikasa ny handefa ity fitaovana ity amin'ny fakantsary mihetsiketsika any amin'ny tsena hafa i Huawei, ka amin'izao fotoana izao dia mila milamina isika mahita ny sary sy horonan-tsary ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Honor 7i amin'ny fakantsary miodina aseho amin'ny fomba ofisialy
Tena mahaliana ity smartphone ity, feno tokoa ho an'ny elanelam-potoana kendrena. Tsy misy isalasalana, Huawei dia mandefa terminal be dia be amin'ny vidiny mirary tokoa.
KJ Rivero dia hoy izy:
kanto dia hita fa masinina amin'ny lafiny rehetra izy io, fa kosa rehefa esorinao ny elastika entin'ny fakantsary hahafahany mamily azy?
Valio amin'i KJ Rivero
Juan David Aguilar Blandón dia hoy izy:
Ny olana amin'ireo finday ireo dia ny fanamboarana azy ireo! Satria vitsy ny olona mazàna no mividy an'ity karazana marika ity ary im-betsaka any no mandefa azy ireo any Shina na tsy misy kojakoja fanampiny
Valiny tamin'i Juan David Aguilar Blandon
Fernando Tallon dia hoy izy:
Misy eh zazalahy miteny hoe ay!
Valiny tamin'i Fernando Tallón
Mijael ben asher dia hoy izy:
Hafahafa ny mahatsikaiky
Valiny tamin'i Mijael Ben Asher
David: $ (@ Davidbc1304) dia hoy izy:
Tsara tarehy io smartphone feno io. iza no manome ahy? satria ny toerana onenako na dia HUAWEI aza dia mora azo hatrany ny Cost D:
Valiny tamin'i David: $ (@ Davidbc1304)
Sony dia nanambara ny SmartBand 2 vaovao azo ampiasaina
Samsung Galaxy S6 Edge, izao no zavatra niainako aorian'ny fampiasako iray volana